A technician prepares COVID-19 coronavirus patient samples for testing atalaboratory in New York's Long Island. Wide scale testing isacritical part of tracking and containing infectious…
ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါရှိမရှိ အမြန်စမ်းသပ်နိုင်တဲ့နည်းတွေ အကြောင်း မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ် Greenville Vidant Medical Center ရဲ့ အဏုဇီဝ ဓါတ်ခွဲခန်းအကြီးအကဲ ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ် ကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးပါမယ်။
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်။.။“အမြန်စမ်းသပ်တာက ၂ နည်းပေါ့နော်။ ၂ နည်း ဆိုတာက စမ်းသပ်တဲ့ ဘယ်ဟာကို ရှာသလဲ ဆိုတာပေါ်မူတည်တာပေါ့။ ဟိုအရင်ကတည်းက swab အာခေါင်တို့ဖတ် ကိုသုံးပြီးရှာတဲ့ PCR (Polymerase chain reaction ) ဥစ္စာမှာ စမ်းသပ်တာလည်း အမြန်သုံးတဲ့ ပလက်ဖေါင်းတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒါက တခု။ နောက်တခုကကျတော့ Antigen test လို့ ခေါ်တယ်။ Antigen. ဆိုတာက ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ အပေါ်ယံက ပရိုတိန်းကို စမ်းတာပေါ့နော်။ အဲဒါကလည်း အမြန်စမ်းတဲ့ နည်းတခု။ အဲဒါကတော့ နောက်ပိုင်း ပေါ်တာပေါ့နော်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လ - ၃ လလောက်က ကုမ္ပဏီတွေ တခုပြီး တခု ပေါ်လာတာ ပေါ့နော်။ အဲလို ၂ မျိုးပေါ့နော်။ အဓိကကတော့။
မေး။. ။“အခု ဒီမှာတက္ကသိုလ်တွေ ပြန်ဖွင့်နေပြီပေါ့နော်။ ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာ saliva test လို့ခေါ်တဲ့ သွားရည်တို့ တံတွေးတို့ကနေပြီးတော့ စမ်းသပ်တာတွေလည်း သုံးတယ် ပြောပါတယ်။ အဲဒီစမ်းသပ်မှုက မြန်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ အဲဒီ စမ်းသပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တကယ့် ဒီမှာ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာပညာရှင်တွေ သုံးကြသလား သိချင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်။.။“ဒီစမ်းသပ်မှုက Saliva direct လို့ခေါ်တာ - ဒါပြီးခဲ့တဲ့တလောကမှာ Yale တက္ကသိုလ်က နေပြီးတော့ နည်း - protocol ကို FDA ကနေapproved လုပ် အတည်ပြုပေးတယ် ဆိုတာပါ။ အဲဒီကနေပြီးတော့ နံမယ်ကြီးသွားတာပါ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဒီစမ်းသပ်မှု တံတွေးကို သုံးပြီးတော့ စမ်းသပ်မှုက တချို့ ကျောင်းတွေမှာတော့ Yale ရဲ့ နည်း - Protocol ကို သုံးပြီးတော့ လုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလောက် ကြီး အမြန်ကြီးတော့ မဟုတ်ဖူးပေါ့နော်။ ပြီးတော့ အခု လောလောဆယ်က ဒီ scientific community သိပ္ပံဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ အခြေအတင် ပြောနေကြတာက ဒီ တံတွေးက universal မဖြစ်ဖူး ပေါ့နော်။ Swab အာခေါင်တုိ့ဖတ် လိုမျိုး သပ်သပ်မှတ်မှတ် တညီတညာထည်း မဟုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မို့လို့ ဓါတ်ခွဲခန်းတွေ အားလုံးကလည်း ဒီစမ်းသပ်မှု tests ကို မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ နောက် Yale ရဲ့ နည်း - Protocol က လည်း ဒီလောက် အမြန်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုတော့ ဓါတ်ခွဲခန်းတွေ တခုနဲ့ တခု ကွာပါတယ်။ ဆိုတော့ တော်တော်များများ မသုံးကြသေးပါဘူး။”
မေး။.။“ဒီ တံတွေးနဲ့ စမ်းသပ်တာအတွက် မပြောခင် စောစောက ပြောတဲ့ အမြန်သုံးလို့ရတဲ့ နည်း ၂ နည်း ပေါ့နော်။ အဲဒီ ၂ နည်းထဲက ပထမနည်း ကို ရှင်းပြပေးပါ။ PCR လို့ခေါ်တဲ့ နည်းကို ရှင်းပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်။.။“ PCR ကို သုံးတဲ့နည်းကတော့ ပထမဆုံးထွက်တာ။ ပြီးတော့ ဒါက standard ပေါ့နော်။ gold standard အကောင်းဆုံးစံ လို့ ခေါ်ရမှာပေါ့။ အခုလောလောဆယ် ဆိုရင်တော့။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ sensitivity တိကျမှုက အရမ်းကောင်းတာကိုး။ PCR နဲ့စမ်းတဲ့ sample နမူနာ ကလည်း နှာခေါင်းကနေ ယူတဲ့ swab အာခေါင်တို့ဖတ်ကို ယူတာပေါ့နော်။ အဲဒါက ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ RNA ကို ပွါးတာပေါ့။ ပွါးပြီးတော့ အပူချိန်နဲ့ လိုက်ပြီး ပွါးတဲ့ PCR နည်းပေါ့နော်။ အဲဒါက အမြန်နည်းတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ မိနစ် ၄၀၊ တကယ်လို့ ပိုးရှိတယ် positive ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ် အတွင်းမှာ positive ဖြစ်တာကို ပြတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီ အမြန်နည်းတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါကတခု။ အဲဒါ PCR ပါ။”
မေး။.။“နောက်တခုကကော။ antigen ဆိုတဲ့နည်း အဲဒါလည်း ရှင်းပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်။.။“ Antigen ဆိုတာက ကျတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ RNA ကို သုံးတာ မဟုတ်ပဲနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် တခုမှာ ဆိုရင် အပြင်မှာ ပေါ့နော်။ ပရိုတိန်းတွေ ရှိတာပေါ့နော်။ သူက မျက်နှာပြင်က ပရိုတိန်းကို စမ်းသပ်တာပေါ့နော်။ ဒီဟာကတော့ amplified ဖြစ်တာ မဟုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် sensitivity တိကျမှုကတော့ နဲနဲတော့ နည်းတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်တယ် ပေါ့နော်။ ဒါကAntigen test ။ ဒါက PCR နောက်ပိုင်းမှာမှ ပေါ်လာတာ။ မြန်တော့မြန်တယ် တိကျမှုတော့ နဲနဲ နည်းတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ မြန်မြန်စမ်းသပ်နိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ screening တွေ ဘာတွေလုပ်ဖို့ ၊point of care ပေါ့နော်။ clinic တွေ ဘာတွေမှာ လုပ်လို့တော့ အဲဒီလိုမျိုး လွယ်တယ်။ အဲဒါက တမျိုးပါ။ Antigen test ပါ။”
မေး။.။“ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်တို့ ဓါတ်ခွဲခန်းတွေမှာ ဒီ ၂ မျိုးကိုပဲ အဓိက ထား စမ်းတာလား။ တခြားဘာနည်း စမ်းသပ်လဲ ပြောပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်။ ။“ဒီ ၂ မျိုးကိုပဲ အဓိက စမ်းတာပါ။ အဓိကက ဓါတ်ခွဲခန်း အကြီးကြီးတွေမှာ ကတော့ ဒီ PCR နည်းကိုပဲ အဓိက စမ်းတာပေါ့နော်။ PCR မှာမှ ပထမပြောတဲ့ အမြန်လုပ်တဲ့ PCR က လက်ဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ခွဲစိတ်ရမယ့် surgery လုပ်ရမယ့် လူနာတို့ဘာတို့ ဆိုရင် အမြန် PCR ကိုသုံးတယ်။ out patient ပြင်ပလူနာ တို့ဘာတို့ ဆိုရင် batch (အတွဲလိုက်) နဲ့လုပ်တဲ့ PCR ။ အဲဒါကတော့ ဒီ swab ကရတဲ့ နမူနာကို သုံးတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီဆေးရုံတွေရဲ့ out patient clinic ပြင်ပလူနာဌာန တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာတော့ Antigen test တွေ ထားထားတာ ပေါ့နော် clinic တွေမှာ။ ဒီ ၂ ခုကိုပဲအဓိက ထားတယ်။ လောလောဆယ်ကတော့ အဲဒီ lab ထဲမှာ တံတွေးစံနစ်ကို စမ်းသပ်ဖို့ အတွက်ကို experiment စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။”
မေး။.။“Saliva test လို့ခေါ်တဲ့ တံတွေးနမူနာစမ်းတဲ့ နည်းလေးကို ပြောပြပေးပါ။ ဘယ်နေရာက နမူနာယူပြီးတော့ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ စမ်းတယ်ဆိုတာ”
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်။.။“Saliva နည်းက ကောင်းတာ တခုကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တံတွေးကို collect လုပ်ရုံ - စုပေးရုံပဲ ပေါ့နော်။ lab ဓါတ်ခွဲခန်းတွေ ဘာတွေကနေ ပြီးတော့ နမူနာ sample ကို ယူစရာမလိုပဲနဲ့ ရိုးရိုး သန့်ရှင်းတဲ့ ခွက်ထဲမှာ တံတွေးကိုယူ။ ယူပြီးတော့ ဥပမာ - Yale Protocol ရဲ့ နည်းနဲ့ အခြေခံပြီး ယူတာဆိုလို့ရှိရင် ဒီ တံတွေးနမူနာကိုextraction လို့ ခေါ်တာပေါ့နော်။ extract လုပ်တယ် ဆိုတာ ဒီ နမူနာကနေပြီးတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ရှိရင် ဗိုင်းရပ်စ်ကို extract လုပ်တယ် ထုတ်ယူတယ်။ အဲဒီကနေမှ နျူကလီရစ် အက်ဆစ် ၊ RNA ကိုပဲ တခါ ပြန်ထုတ်တာပေါ့နော်။ တံတွေးထဲမှာRNA ရှိရင် ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ RNA ကိုပဲ ထုတ်ပြီးတော့ အဲဒါကို PCR methods နည်းကိုပဲ ပြန်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။”
မေး။..။“တံတွေးထဲမှာ ပါတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ထုတ်ယူတာပဲ ပေါ့နော်။”
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်။. ။“ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။”
မေး။. ။“ဒီ တံတွေးနမူနာယူတာက သိပ်ပြီးတော့ မတိကျဘူးလို့ ပြောတာ အဲဒါ ဘာကြောင့် ပြောနိုင်တာပါလဲ။”
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်။. ။“ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အဲဒါက တံတွေး ဘယ်လိုထွေးလဲ ဆိုတာပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အမှန်ဆို တံတွေးက ပုံမှန်ဆိုရင် ဒီ လျှာအောက်ကနေပြီးတော့ ရိုးရိုး တံတွေးအကြည်ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒါ ဆိုလို့ရှိရင် sample ကိုစမ်းသပ်ရတာကလည်း အဆင်ပြေတယ် ပေါ့နော်။ အခုက တံတွေးက မတိကျဘူး ဆိုတာက လူနာတွေက တံတွေး ထွေးနည်းကို မသိတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ တံတွေးချည်းပဲ ဒီအတိုင်း အကြည်ချည်းပဲ ရရမယ့် အစား ချောင်းဆိုးပလိုက်တာတို့၊ အဲဒီလိုမျိုး။ အဲဒီအခါကျလို့ရှိရင် ချွဲတွေ ပါလာတာတို့ အဲဒီလိုမျိုးတွေ ပါလာတဲ့ အတွက်ကြောင့် test စစ်ဆေးမှု လုပ်တဲ့ တကယ်တမ်းအချိန် ကျတော့ အခက်အခဲ ဖြစ်တာပေါ့။ အဲဒီအချက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တာလဲ ပါပါတယ် ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ ဗိုင်းရပ်စ်က ဘယ်လောက်လောက် ပါးစပ်အာခေါင်မှာ နေလဲ၊ အဲဒီမှာ နေတာက သိပ်ပြီးတော့concentrate မဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုတော့ saliva test က variation အရမ်း များပါတယ်။ ဒီ နှာခေါင်းကနေ အတွင်းပိုင်းကို ထိုးတဲ့ swab sample အာခေါင်တို့ဖတ် နမူနာ ထက် စာလို့ ရှိရင်ပေါ့နော်။”
မေး။.။“တံတွေးနမူနာ မယူပဲနဲ့ တခြား ပိုတိကျကောင်းမွန်တဲ့နည်း ဘယ်နည်းက သုံးလို့ အကောင်းဆုံးလည်း ပြောပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာဖြူမြတ်သွယ်။. ။“ပထမဆုံး ထွက်တဲ့ ဒီနှာခေါင်း အဆုံးအထိထိုးယူရတဲ့ swab နှာခေါင်းတို့ဖတ် ကိုသုံးတာက အတိကျဆုံး။ ဒါပေမယ့် ဒီ sample ကို ကောက်ယူတဲ့လူက ကောက်တာနည်းမမှန် လို့ရှိရင် ဘယ်လောက်ပဲ စမ်းသပ်တာက တိကျဆုံး ဆိုပေမယ့်လည်း ဒါက ပိုးမတွေ့တဲ့ negative တွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ် ပေါ့နော်။”
ကိုဗဈ ၁၉ ရောဂါရှိမရှိ အမွနျစမျးသပျနိုငျတဲ့နညျးတှေ အကွောငျး မွောကျကာရိုလိုငျးနားပွညျနယျ Greenville Vidant Medical Center ရဲ့ အဏုဇီဝ ဓါတျခှဲခနျးအကွီးအကဲ ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ ကို မေးမွနျးပွီး တငျပွပေးပါမယျ။
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ။. ။“အမွနျစမျးသပျတာက ၂ နညျးပေါ့နျော။ ၂ နညျး ဆိုတာက စမျးသပျတဲ့ ဘယျဟာကို ရှာသလဲ ဆိုတာပျေါမူတညျတာပေါ့။ ဟိုအရငျကတညျးက swab အာခေါငျတို့ဖတျ ကိုသုံးပွီးရှာတဲ့ PCR (Polymerase chain reaction ) ဥစ်စာမှာ စမျးသပျတာလညျး အမွနျသုံးတဲ့ ပလကျဖေါငျးတှေ ပျေါလာပါတယျ။ အဲဒါက တခု။ နောကျတခုကကတြော့ Antigen test လို့ ချေါတယျ။ Antigen. ဆိုတာက ဗိုငျးရပျဈရဲ့ အပျေါယံက ပရိုတိနျးကို စမျးတာပေါ့နျော။ အဲဒါကလညျး အမွနျစမျးတဲ့ နညျးတခု။ အဲဒါကတော့ နောကျပိုငျး ပျေါတာပေါ့နျော။ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ လ - ၃ လလောကျက ကုမ်ပဏီတှေ တခုပွီး တခု ပျေါလာတာ ပေါ့နျော။ အဲလို ၂ မြိုးပေါ့နျော။ အဓိကကတော့။
မေး။. ။“အခု ဒီမှာတက်ကသိုလျတှေ ပွနျဖှငျ့နပွေီပေါ့နျော။ ဒီတက်ကသိုလျတှမှော saliva test လို့ချေါတဲ့ သှားရညျတို့ တံတှေးတို့ကနပွေီးတော့ စမျးသပျတာတှလေညျး သုံးတယျ ပွောပါတယျ။ အဲဒီစမျးသပျမှုက မွနျတယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။ အဲဒီ စမျးသပျမှုနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ တကယျ့ ဒီမှာ ဓါတျခှဲခနျးမှာပညာရှငျတှေ သုံးကွသလား သိခငျြပါတယျ။
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ။. ။“ဒီစမျးသပျမှုက Saliva direct လို့ချေါတာ - ဒါပွီးခဲ့တဲ့တလောကမှာ Yale တက်ကသိုလျက နပွေီးတော့ နညျး - protocol ကို FDA ကနေ approved လုပျ အတညျပွုပေးတယျ ဆိုတာပါ။ အဲဒီကနပွေီးတော့ နံမယျကွီးသှားတာပါ။ တကယျတမျးကတြော့ ဒီစမျးသပျမှု တံတှေးကို သုံးပွီးတော့ စမျးသပျမှုက တခြို့ ကြောငျးတှမှောတော့ Yale ရဲ့ နညျး - Protocol ကို သုံးပွီးတော့ လုပျကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီလောကျ ကွီး အမွနျကွီးတော့ မဟုတျဖူးပေါ့နျော။ ပွီးတော့ အခု လောလောဆယျက ဒီ scientific community သိပ်ပံဆိုငျရာ အသိုငျးအဝိုငျးမှာ အခွအေတငျ ပွောနကွေတာက ဒီ တံတှေးက universal မဖွဈဖူး ပေါ့နျော။ Swab အာခေါငျတုိ့ဖတျ လိုမြိုး သပျသပျမှတျမှတျ တညီတညာထညျး မဟုတျတဲ့ အတှကျကွောငျ့ မို့လို့ ဓါတျခှဲခနျးတှေ အားလုံးကလညျး ဒီစမျးသပျမှု tests ကို မလုပျနိုငျသေးပါဘူး။ နောကျ Yale ရဲ့ နညျး - Protocol က လညျး ဒီလောကျ အမွနျကွီးမဟုတျပါဘူး။ ဆိုတော့ ဓါတျခှဲခနျးတှေ တခုနဲ့ တခု ကှာပါတယျ။ ဆိုတော့ တျောတျောမြားမြား မသုံးကွသေးပါဘူး။”
မေး။. ။“ဒီ တံတှေးနဲ့ စမျးသပျတာအတှကျ မပွောခငျ စောစောက ပွောတဲ့ အမွနျသုံးလို့ရတဲ့ နညျး ၂ နညျး ပေါ့နျော။ အဲဒီ ၂ နညျးထဲက ပထမနညျး ကို ရှငျးပွပေးပါ။ PCR လို့ချေါတဲ့ နညျးကို ရှငျးပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ။. ။“ PCR ကို သုံးတဲ့နညျးကတော့ ပထမဆုံးထှကျတာ။ ပွီးတော့ ဒါက standard ပေါ့နျော။ gold standard အကောငျးဆုံးစံ လို့ ချေါရမှာပေါ့။ အခုလောလောဆယျ ဆိုရငျတော့။ ဘာဖွဈလို့လညျး ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ sensitivity တိကမြှုက အရမျးကောငျးတာကိုး။ PCR နဲ့စမျးတဲ့ sample နမူနာ ကလညျး နှာခေါငျးကနေ ယူတဲ့ swab အာခေါငျတို့ဖတျကို ယူတာပေါ့နျော။ အဲဒါက ဗိုငျးရပျဈရဲ့ RNA ကို ပှါးတာပေါ့။ ပှါးပွီးတော့ အပူခြိနျနဲ့ လိုကျပွီး ပှါးတဲ့ PCR နညျးပေါ့နျော။ အဲဒါက အမွနျနညျးတှေ ပျေါလာပါတယျ။ မိနဈ ၄၀၊ တကယျလို့ ပိုးရှိတယျ positive ဖွဈတယျဆိုရငျ ၅ မိနဈ ၁၀ မိနဈ အတှငျးမှာ positive ဖွဈတာကို ပွတယျပေါ့နျော။ အဲဒီ အမွနျနညျးတှေ ပျေါလာပါတယျ။ ဒါကတခု။ အဲဒါ PCR ပါ။”
မေး။. ။“နောကျတခုကကော။ antigen ဆိုတဲ့နညျး အဲဒါလညျး ရှငျးပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ။. ။“ Antigen ဆိုတာက ကတြော့ ဗိုငျးရပျဈရဲ့ RNA ကို သုံးတာ မဟုတျပဲနဲ့ ဗိုငျးရပျဈ တခုမှာ ဆိုရငျ အပွငျမှာ ပေါ့နျော။ ပရိုတိနျးတှေ ရှိတာပေါ့နျော။ သူက မကျြနှာပွငျက ပရိုတိနျးကို စမျးသပျတာပေါ့နျော။ ဒီဟာကတော့ amplified ဖွဈတာ မဟုတျတဲ့ အတှကျကွောငျ့ sensitivity တိကမြှုကတော့ နဲနဲတော့ နညျးတယျ။ ဒါပမေယျ့ မွနျတယျ ပေါ့နျော။ ဒါက Antigen test ။ ဒါက PCR နောကျပိုငျးမှာမှ ပျေါလာတာ။ မွနျတော့မွနျတယျ တိကမြှုတော့ နဲနဲ နညျးတယျ။ ဒါပမေယျ့လို့ မွနျမွနျစမျးသပျနိုငျတဲ့ အတှကျကွောငျ့မို့လို့screening တှေ ဘာတှလေုပျဖို့ ၊ point of care ပေါ့နျော။ clinic တှေ ဘာတှမှော လုပျလို့တော့ အဲဒီလိုမြိုး လှယျတယျ။ အဲဒါက တမြိုးပါ။ Antigen test ပါ။”
မေး။. ။“ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျတို့ ဓါတျခှဲခနျးတှမှော ဒီ ၂ မြိုးကိုပဲ အဓိက ထား စမျးတာလား။ တခွားဘာနညျး စမျးသပျလဲ ပွောပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ။ ။“ဒီ ၂ မြိုးကိုပဲ အဓိက စမျးတာပါ။ အဓိကက ဓါတျခှဲခနျး အကွီးကွီးတှမှော ကတော့ ဒီ PCR နညျးကိုပဲ အဓိက စမျးတာပေါ့နျော။ PCR မှာမှ ပထမပွောတဲ့ အမွနျလုပျတဲ့ PCR က လကျဝငျတဲ့ အတှကျကွောငျ့မို့လို့ ခှဲစိတျရမယျ့ surgery လုပျရမယျ့ လူနာတို့ဘာတို့ ဆိုရငျ အမွနျ PCR ကိုသုံးတယျ။ out patient ပွငျပလူနာ တို့ဘာတို့ ဆိုရငျ batch (အတှဲလိုကျ) နဲ့လုပျတဲ့ PCR ။ အဲဒါကတော့ ဒီ swab ကရတဲ့ နမူနာကို သုံးတယျ။ ကနြျောတို့ ဒီဆေးရုံတှရေဲ့ out patient clinic ပွငျပလူနာဌာန တှေ ရှိတယျ။ အဲဒီမှာတော့ Antigen test တှေ ထားထားတာ ပေါ့နျော clinic တှမှော။ ဒီ ၂ ခုကိုပဲအဓိက ထားတယျ။ လောလောဆယျကတော့ အဲဒီ lab ထဲမှာ တံတှေးစံနဈကို စမျးသပျဖို့ အတှကျကို experiment စမျးသပျမှုတှေ လုပျနပေါတယျ။”
မေး။. ။“Saliva test လို့ချေါတဲ့ တံတှေးနမူနာစမျးတဲ့ နညျးလေးကို ပွောပွပေးပါ။ ဘယျနရောက နမူနာယူပွီးတော့ ဘယျလိုပုံစံနဲ့ စမျးတယျဆိုတာ”
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ။. ။“Saliva နညျးက ကောငျးတာ တခုကတော့ ကိုယျ့ဟာကိုယျ တံတှေးကို collect လုပျရုံ - စုပေးရုံပဲ ပေါ့နျော။ lab ဓါတျခှဲခနျးတှေ ဘာတှကေနေ ပွီးတော့ နမူနာ sample ကို ယူစရာမလိုပဲနဲ့ ရိုးရိုး သနျ့ရှငျးတဲ့ ခှကျထဲမှာ တံတှေးကိုယူ။ ယူပွီးတော့ ဥပမာ - Yale Protocol ရဲ့ နညျးနဲ့ အခွခေံပွီး ယူတာဆိုလို့ရှိရငျ ဒီ တံတှေးနမူနာကို extraction လို့ ချေါတာပေါ့နျော။ extract လုပျတယျ ဆိုတာ ဒီ နမူနာကနပွေီးတော့ ဗိုငျးရပျဈရှိရငျ ဗိုငျးရပျဈကို extract လုပျတယျ ထုတျယူတယျ။ အဲဒီကနမှေ နြူကလီရဈ အကျဆဈ ၊ RNA ကိုပဲ တခါ ပွနျထုတျတာပေါ့နျော။ တံတှေးထဲမှာRNA ရှိရငျ ဗိုငျးရပျဈရဲ့ RNA ကိုပဲ ထုတျပွီးတော့ အဲဒါကို PCR methods နညျးကိုပဲ ပွနျသုံးတာဖွဈပါတယျ။”
မေး။. .။“တံတှေးထဲမှာ ပါတဲ့ ဗိုငျးရပျဈကို ထုတျယူတာပဲ ပေါ့နျော။”
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ။. ။“ဟုတျတယျ။ ဟုတျပါတယျ။”
မေး။. ။“ဒီ တံတှေးနမူနာယူတာက သိပျပွီးတော့ မတိကဘြူးလို့ ပွောတာ အဲဒါ ဘာကွောငျ့ ပွောနိုငျတာပါလဲ။”
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ။. ။“ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ အဲဒါက တံတှေး ဘယျလိုထှေးလဲ ဆိုတာပျေါ မူတညျပါတယျ။ အမှနျဆို တံတှေးက ပုံမှနျဆိုရငျ ဒီလြှာအောကျကနပွေီးတော့ ရိုးရိုး တံတှေးအကွညျဖွဈရမယျ။ အဲဒါ ဆိုလို့ရှိရငျ sample ကိုစမျးသပျရတာကလညျး အဆငျပွတေယျ ပေါ့နျော။ အခုက တံတှေးက မတိကဘြူး ဆိုတာက လူနာတှကေ တံတှေး ထှေးနညျးကို မသိတဲ့ အတှကျကွောငျ့မို့လို့ တံတှေးခညျြးပဲ ဒီအတိုငျး အကွညျခညျြးပဲ ရရမယျ့ အစား ခြောငျးဆိုးပလိုကျတာတို့၊ အဲဒီလိုမြိုး။ အဲဒီအခါကလြို့ရှိရငျ ခြှဲတှေ ပါလာတာတို့ အဲဒီလိုမြိုးတှေ ပါလာတဲ့ အတှကျကွောငျ့ test စဈဆေးမှု လုပျတဲ့ တကယျတမျးအခြိနျ ကတြော့ အခကျအခဲ ဖွဈတာပေါ့။ အဲဒီအခကျြကွောငျ့မို့လို့ဖွဈတာလဲ ပါပါတယျ ပေါ့နျော။ ပွီးတော့ ဗိုငျးရပျဈက ဘယျလောကျလောကျ ပါးစပျအာခေါငျမှာ နလေဲ၊ အဲဒီမှာ နတောက သိပျပွီးတော့ concentrate မဖွဈတဲ့ အတှကျကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါဆိုတော့ saliva test က variation အရမျး မြားပါတယျ။ ဒီ နှာခေါငျးကနေ အတှငျးပိုငျးကို ထိုးတဲ့ swab sample အာခေါငျတို့ဖတျ နမူနာ ထကျ စာလို့ ရှိရငျပေါ့နျော။”
မေး။. ။“တံတှေးနမူနာ မယူပဲနဲ့ တခွား ပိုတိကကြောငျးမှနျတဲ့နညျး ဘယျနညျးက သုံးလို့ အကောငျးဆုံးလညျး ပွောပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာဖွူမွတျသှယျ။. ။“ပထမဆုံး ထှကျတဲ့ ဒီနှာခေါငျး အဆုံးအထိထိုးယူရတဲ့ swab နှာခေါငျးတို့ဖတျ ကိုသုံးတာက အတိကဆြုံး။ ဒါပမေယျ့ ဒီ sample ကို ကောကျယူတဲ့လူက ကောကျတာနညျးမမှနျ လို့ရှိရငျ ဘယျလောကျပဲ စမျးသပျတာက တိကဆြုံး ဆိုပမေယျ့လညျး ဒါက ပိုးမတှတေဲ့ negative တှလေညျး ဖွဈနိုငျတယျ ပေါ့နျော။”